“အောက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်” by Saya Soe Min - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Murderer Min Oke Soe’s sentence changed from Life in prison to 10 Years. Unfair!
Next: Baby May Than Nu, Min Thant Mg Mg »
Myanmar Blog » Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese » “အောက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်” by Saya Soe Min
Myanmar celebrity Khine Thin Kyi and her daughter looks like sisters in
Top Songs this week (Youtube Videos)
Sexy Bitch (feat. Akon) – David Guetta Obsessed (Remix Featuring Gucci Mane) –
ဓာတ်ပုံ- ဂျေမောင်မောင် (အမရပူရ) မီးအိမ်ရှင်အိပ်မက် ——– ရေးသားသူ- အိဖြူလွင် တောင်ခြေရွာတစ်ရွာတွင် ကျင်းပနေသည့် မူလတန်းလွန်ကျောင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် အသက်(၃၀)အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးက မိုးပေါ်ပျံတက်သွားသည့် မိုးပျံပူဖောင်းများကို
Moe Hay Ko with bob haircut
Moe Hay Ko has recently got herselfabob haircut – she
အဲသည် အထက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ မနေ့တနေ့က ကိုယ့်အမေအိမ်ပေါ်ကို တာဝတိန်သာက သုဇိတာသုံးပြီးသား အန်းလီပန်းနုရောင် မရင့်တရင့်ကလေး သစ်ရွက်ကြွေသလို ဝေ့ကာဝဲကာကျလာတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ကျနေကျပါ။ မခံနိုင်လို့ အမိုးမိုးထားတော့ ကျချင်တာကျ မမြင်ရဘူး။ မိုးရွာလိုက်ရင် အဲ့ဒီခေါင်မိုးပေါ်က ဦးမာဃသုံးတဲ့ ကွန်ဒွန်အဟောင်းတွေလည်း ရေနဲ့ ပါသွား အေးရော။ အခုတော့ အမိုးတွေ ဖျက်လိုက်ရတဲ့အခါ အပေါ်အထပ်ထပ်က ပစ်လေသမျှ အမှိုက်တွေဟာ “တံချူတွေတောင် ချူဖို့မလိုပေါင်ရှင်။ ဆီးကြိုလှည့် ဝင့်ကာဝေ့ကာ ကြွေကျလာမယ်အစဉ်။” ဆို မြန်မာ့သားကောင်းတွေ ရှိရာကို ဂုဏ်ပြုသက်ဆင်းနေလေရဲ့။ လူဆိုတာက နေတဲ့အထပ်မြင့်လေလေ။ အထက်တန်းကျလေလေ မဟုတ်လား။ အိမ်ရှေ့ကားလမ်းမပေါ် ကိုယ့်ကားကိုယ်ရပ်ထားလည်း မနက်လင်းတိုင်း ကားခေါင်မိုးပေါ်က ကွမ်းတံတွေးအကွက်လိုက်ကြီးကို ဆေးကြောရှင်းလင်းရတယ်။ အောက်ထပ်မှာနေရင် အောက်တန်းစားချည့်ပဲ။ မှတ်ထား။
ကိုယ်တို့ဆီက ပညာရေးစံနစ်မှာ ပြည်သူ့နီတိဆိုတာ မသင်တော့ဘူး။ စာမေးပွဲမှာ မမေးလို့။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့မြန်မာလူငယ်ကလေးတွေဟာ နီတိဆိုရင် နီနီခင်ဇော်လောက်တောင် မကြားဖူးဘူး။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲ့ဒါသင်တယ်။ ကျောင်းကအိမ်သာထဲမှာ ရေဘုံဘိုင်တစ်ခု ပြန်မပိတ်ခဲ့ရင် တစ်နာရီကြာရင် ရေဘယ်လောက်ကုန်သွားမယ်။ တစ်ရက်ကြာရင် ရေဘယ်လောက်ကုန်သွားမယ်။ နိုင်ငံအတွက် ပိုက်ဆံဘယ်လောက် အလဟသဖြစ်တယ် ကလေးလေးတွေကအစ နားလည်အောင် သင်ထားတယ်။ ကိုယ်တို့ဆီကရုံးတွေမှာ “ရုံးသွားရုံးပြန် မမေ့ရန် မီးနှင့်ပန်ကာပိတ်” လို့ ရေးကပ်ထားတာတောင် ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်လို့ မြန်မာပြည်မှာ လောင်သမျှမီးဟာ ဝါယာရှော့ခ်နဲ့ချည့် စတာ။ သူများတွေ မပြောနဲ့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် အဲ့ဒါ ကိုယ့်အိပ်ထဲက ပိုက်ဆံထွက်မှ နားလည်တာ။ လောက်ကိုင်ဆေးရုံမှာ ဆေးရုံအုပ် ခဏလုပ်နေတုန်းက အိမ်သာနားကဖြတ်သွားတိုင်း အထဲမှာ ရေမပိတ်ပဲ တန်းလန်းထားတာ ရှိမရှိ ဝင်ဝင်ကြည့်ရတယ်။ ဆယ်ခါကြည့်ရင် ကိုးခါမိတယ်။ ရေမပိတ်ရင် အပေါ်ကတိုင်ကီထဲ မော်တာနဲ့ တွန်းတင်ထားရတဲ့ ရေတွေ မသုံးလိုက်ရပဲနဲ့ ကုန်သွားမယ်။ ရေကုန်လို့ မော်တာနဲ့ထပ်တင်ရင် မီးဖိုးရော ရေဖိုးရော ဆေးရုံကပေးရမယ်။ ဘယ်သူကမှ လာမပေးဘူး။ အဲဒီအရပ်က လူနာတွေက ရေပိတ်ဖို့နေနေသာသာ အိမ်သာတံခါးတောင် ပိတ်ပါလို့မရဘူး။ ပြန်မဖွင့်တတ်လို့ ဆောင့်ကန်ထားတာ ချက်တွေ အကုန်ပြုတ်နေပြီ။ ဒီလူတွေသာ ဆီဒိုးနားက အိမ်သာထဲခေါ်သွားရင် ဆီးအိုးထဲက ပရုတ်ခဲတွေ အိမ်သုံးဖို့ သယ်လာမလားမသိ။ (အမယ်။ သူများသွားပြောနေ သူဖြင့် တုတ်ခနောင်းနဲ့ ကုန်းတဲ့အရပ်က လာတာများ။) အမူအကျင့် အသေးအဖွဲကလေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ သိရင် ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ် အောက်တန်းမကျအောင် ကိုယ့်ဘာသာ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေပါလေ။ မြန်မာတွေ အထက်တန်းကျတယ် အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပြင်မှပဲရမယ်။ အရင်ဆုံးကတော့ ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေသလဲ ကိုယ့်ဘာသာ သိအောင် လုပ်ကြ။
ခုခေတ်မှာ လူကဲခတ်ရင် အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာ ရဲစခန်းကယူတဲ့ ထောက်ခံစာ လို့ပဲ သိကြတယ်။ ရွှေရှိရင် ငွေရှိရင် အာဏာပါဝါ အရှိန်အဝါရှိရင် မထွေးအသားလောက်တောင် ရေဆေးစရာ မလိုဘူးလို့ သဘောထားတယ်။ စကားထဲတောင် ထည့်ပြောစရာ မလိုဘူး လို့ ယူဆတယ်။ အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပိုးထိုးလောက်ကိုက်နေပါစေ၊ ရွှေကွပ်ပြီး ကလပ်ပေါ်တင်လိုက်ရင် မင်းကြိုက်စိုးကြိုက် ကာလသားများနဲ့ လားလားမှမထိုက်ဆိုပြီး မော်ဖူးချင် သံတော်ဦးတင်ရတဲ့ အစားထဲရောက်သွားရော။ အများစုက အဲသည် အပေါ်ယံတွေမှာပဲ တန်ကြေးတွေတွက်ပြီး လူကိုလူလို အကဲမဖြတ်တော့ဘူး။ ရှင်ဘုရင်နဲ့ ညားမှ မိဖုရားဖြစ်မှာဆိုတော့ သူ့ဘာသူ မောင်းမတစ်ထောင်ထားထား ဘာအရေးလဲ။ ကိုယ့်သမီးလေး ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်သုတ်ပလေ့စေ။ ငါ ရှင်ဘုရင့်ယောက္ခမတော်ရဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ “သမီးရယ် ကြိုက်လိုက်ပါ သမီးရယ်” ဆိုတာက ကိုယ့်သမီးကိုယ် ဖြောင်းဖျရတာမို့ လူကြားကောင်းသေးတယ်။ သမီးကြိုက်ချင်ကြိုက် မကြိုက်ချင်နေ။ “ယူလိုက်ပါ အန်ကယ်ရယ်။ သမီးလေးက ဦးကို မြင်းမြင်းချင်း နွားနွားချင်းကတည်းက ချစ်ရှာတာပါ။” လို့ ကိုယ်တိုင်တက်လှော်ရတာ ပိုအဖြစ်ဆိုးတာပေါ့။
ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဝန်ကြီးသားသမီး ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးချင်းမို့လို ရွှေချင်းထပ်မြတ်ပါတယ်။ စိန်ချင်းဖလှယ် ကြွယ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိပ်ထဲ အဖိတ်ခံထားတဲ့ဟာတွေ စလှယ်ဝင် ဖင်မည်းတဲ့အထိခံသလား လိုက်ကြည့်စမ်းပါ။ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရရင်တောင် အသံမထွက်စေနဲ့။ ကိုယ်လိမ်မာရင် ကိုယ့်ဖို့ချည့်ပဲဆို မနိုင်၍သည်းခံရခြင်းသည်လည်းကောင်း လုပ်နေတာတွေ ပုံလို့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပျော်သလိုနေ။ ဆာရင် အပြင်မှာဆွဲစား၊ စပွန်ဆာပေးချင် ကက်တလောက်နဲ့ ပြမယ်။ ခေါင်းခေါက် ရွေး။ မြည်းကြည့်ပြီးမှ ပိုက်ဆံပေး။ သူ့ဘာသူ မီးစာကုန် ဆီခန်းတော့ အင်းယားလမ်းထဲ အိမ်တစ်လုံးလောက်ကျန်ရင် တော်ရောပေါ့။ အထက်တန်းစားဘဝမှာ နေချင်ရင် အထက်တန်းစားစရိုက်ကိုလည်း ယဉ်ပါးရမယ်။ နေ့ခင်းမှာ လမသာဘူး။ ညခင်းဘက် နေမထွက်ဘူး။ စာရိတ္တကောင်းတာမှ လိုချင်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းအဝကနေ လူပြန်တော်စောင့်ယူ။ (ဒါတောင် မစိုးရိမ်တိုက်က ဟိုကိုယ်တော်နဲ့ အပေါင်းအပါဆို ရှောင်လိုက်ဦး။)